Chelmo - ခဏခဏ အလုပ်ပြောင်းနေတဲ့ ရာသီခွင်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
ခဏခဏ အလုပ်ပြောင်းနေတဲ့ ရာသီခွင်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
အခက်အခဲတွေကြောင့် အလုပ်တွေ ပြောင်းကြပင်မယ့်လည်း ဘယ်သူက အများဆုံးပြောင်းကြလဲ။ နံပါတ် ၁၂ ကနေ စလိုက်မယ်နော်။
၁၂. မကာရရာသီ (Capricorn) : ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အတွင်းရှးရိုးဆန်တဲ့အတွေးတွေရှိတာကြောင့် အလုပ်တစ်ခုကို ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် ပင်စင်ယူတဲ့အချိန်အထိ ဒီနေရာမှာ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိသူတစ်ယောက်ပါ။
၁၁. ဗိစ္ဆာရာသီ (Scorpis): အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အတွင်းသည်းခံနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုပဲအလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ တွေ့ကြုံပင်မယ့်လည်း အလုပ်ကိုမပြောင်းပဲ ကြိုးစားမယ့်သူတစ်ယောက်ပါ။
၁၀. တူရာသီ (Libra) : စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်အတွင်းအလုပ်ခွင်ကသူတွေကို တန်ဖိုးထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သံယောဇဉ်တွေ ငြိတွယ်လာပြီဆိုရင် အမြဲဆိုသလို ဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲ ကူညီရိုင်းပင်းပြီး နေချင်သူပါ။
၀၉. သိဟ်ရာသီ (Leo) : ဇူလိုင် ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ် ၂၁ ရက်အတွင်းအလုပ်ပြောင်းဖို့မပြောနဲ့ တခုခုကို အပြောင်းအလဲကိုလုပ်ရမယ့်ဆိုရင် ပျင်းလွန်းလို့သေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနေရာမှာ ကြာကြာ အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ယောက်ပါ။
၀၈. ကရကဋ်ရာသီ (Cancer) : ဇွန် ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်အတွင်းအမြဲတမ်း မိသားစုအကြောင်းကိုတွေးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မိဘနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာ အလုပ်ရရတာကို စိတ်ချမ်းသာသူပါ။
၀၇. ကန်ရာသီ (Virgo) : သြဂုတ် ၂၂ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်းသူကတော့ သင်တန်းတွေတက်ပြီး အောင်လက်မှတ်တွေကို စုဆောင်းတတ်သူပါ။ သင်တန်းမှာတတ်မြောက်လာတဲ့စွမ်းရည်ကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ ချက်ချင်းဆိုသလို အသုံးချတတ်တာကြောင့် တနေရာတည်းမှာ ကြာရှည်အလုပ်လုပ်သူတစ်ယောက်ပါ။
၀၆. မိဿရာသီ (Aries) : မတ် ၂၁ ရက်မှ ဧပြီ ၂၀ ရက်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတော့ ကိုယ့်အတွက် အနာဂတ်မှာ တန်ဖိုးရှိမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ကို အမြဲရှာနေတတ်သူပါ။
၀၅. ဓနုရာသီ (Sagittarius) : နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အတွင်းအလုပ်ထက်ကို ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို ဦးစားပေးတာကြောင့် အချိန်ပိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ပြီး ပိတ်ရက်များတဲ့အလုပ်ကို ရွေးပြီး လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
၀၄. ပြိဿရာသီ (Taurus) : ဧပြီ ၂၁ ရက်မှ မေ ၂၀ ရက်အတွင်းအလုပ်ထက်ကို လခကိုအဓိကထားသူဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိအလုပ်ထက်ကို ဝင်ငွေကောင်းမယ့်နေရာကို ရမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းအလုပ်ကိုပြောင်းမှာပါ။
၀၃.မိန်ရာသီ (Pisces) : ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ မတ်လ ၂၀ ရက်အတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး အလုပ်ကိုပြောင်းမလား အမြဲဆုံးဖြတ်တတ်သူပါ။ အထက်လူကြီးရဲ့အဆူကိုခံရ၊ စီနီရာတွေရဲ့အဆူကိုခံရ ဖြစ်နေရင် အလုပ်ထွက်ချင်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အမြဲတန်ဖိုးထားပေးတဲ့ အလုပ်ခွင်ကို ပိုပြီး တက်မက်တတ်သူပါ။ လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့လူမှုရေးအပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ချက်ချင်းဆိုသလို အလုပ်အသစ်ကို ရှာနေမှာပါ။
၀၂. မေထုန်ရာသီ (Gemini) : မေ ၂၁ ရက်မှ ဇွန် ၂၀ ရက်အတွင်းအလုပ်မှာ ပျင်းလာရင် ချက်ချင်းကို အလုပ်ထွက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နားလည်လာတဲ့အလုပ်ကို အမြဲတမ်းလုပ်နေရတော့ လည်ပတ်နေရတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဒီလူတွေပဲဆိုတော့ ကြာတော့ ငြီးငွေ့လာတတ်သူပါ။　အမြဲပေါ့ပါးသွက်လက်သူဖြစ်တာကြောင့် ချက်ချင်းဆိုသလို အလုပ်ထွက်စာတင်ပြီး နောက်အလုပ်ဆီကို အမြန်ပင်ကူးတော့မှာပါ။
၀၁. ကုမ်ရာသီ (Aquarius) : ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်အတွင်းသူကတော့ အလုပ်ဘဝကို အမြဲတိုးတက်ဖို့ရန် ရည်ရွယ်ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီး အလုပ်သစ်ကိုပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်ရှိအလုပ်မှာ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်အရာမရှိတော့ရင် ချက်ချင်းဆိုသလို နောက်တနေရာကို ပြောင်းတတ်ပါတယ်။　လက်ရှိရာထူးထက် အလုပ်မှာပျော်ပြီး လခလည်းကောင်းတဲ့နေရာလည်းပြီး တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းတွေများပြားမယ့်နေရာကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ တခုပြောင်းရင် တခါတိုးတက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်ကိုသွားသွား အဆင်ပြေမှာပါ။